थाइराइडको समस्या बढेपनि यो रोगसंग डराई हाल्नुपर्दैन : डा. विनय भट्टराई « News24 : Premium News Channel
थाइराइडको समस्या बढेपनि यो रोगसंग डराई हाल्नुपर्दैन : डा. विनय भट्टराई
प्रकाशित मिति : Jun 19, 2019
थाइराइड अहिले नेपाली समाजमा चर्चाको विषय बनेको छ । विशेषत महिलामा बढी देखिने यो रोगको बारेमा अझै पनि धेरै नेपाली अनभिज्ञ छन् । यो रोग कस्तो अवस्थामा लाग्छ , कुन उमेरकालाई यो रोगले समात्छ, के खाने , के बार्ने र यस्को असरले शरीरमा के कस्तो क्षति पु¥याउछ लगायत धेरै विषयमा धेरै नेपालीअझै पनि जानकार छैनन् ।
नुनको अभावमा घाँटीमा गलगाँड आउछ भन्ने गाउँघरको पुरानो चर्चा अहिले थाइराइडसंग जोडेर हेर्ने समेत गरिएको छ । शहरी क्षेत्रमा नै यस रोगबारे अनभिज्ञता व्याप्त हुँदा नेपालको ग्रामीण क्षेत्रको अवस्था कस्तो होला?यही रोगको विषयमा केन्द्रित रहेर न्युज २४ टेलिभिजनले इस्युज अफ द डे आइओडीका लागि थाइराइड विशेषज्ञ डाक्टर विनय भट्टराईसंग कुराकानीका लागि निम्त्याएको छ ।
थाइराइड भनेको खासमा एउटा ग्रन्थीहो, घाटीको अगाडि पुतलीको आकारमा बसेको ग्रन्थीलाई थाइराइड भनिन्छ । यो धेरै उत्पादन भएमा हाइपर थाइराईड र कम उत्पादन भएमा हाइपो थाइराइड हुने गर्छ । थाइराइड भन्ने सुन्ने वित्तिकै घाँटीमा हुने ग्लाण्ड भन्ने बुझन् सकिन्छ । डा. भट्टराईका अनुसार थाइराइड अर्थात ग्लाण्डमा कहिलेकाँही गिर्खाजस्तो आएमा क्यान्सरको समस्या समेत हुनसक्छ ।
पहिला पहिला नेपालमा हाइपर थाइराइडको जाँच नभएको कारण खासै यो रोगको बिरामी नदेखिएपनि पछिल्लो समय मानिसमा आएको स्वास्थ्य सम्बन्धि ज्ञानको कारण स्वास्थ्य परीक्षणबाट थाइराइडको समस्या भएको बिरामीहरु बढेको भएपनि थाइराइडको समस्यामा डराई हाल्नुपर्ने अथवा ठूलो समस्याको रुपमा लिनुपर्ने अवस्थापनि नरहेको डा. भट्टराईको भनाई रहेको छ । वास्तवमा यस्लाई रोग भन्न नै मिल्दैन्, यो समस्या जुन उमेर समुहलाई पनि हुन सक्छ । विशेषगरी यो समस्या महिलामा देखिने गर्छ ।
हाइपो थाइराइड भएमामोटाउदै जाने, थाक्ने गल्ने, कपाल झर्ने, महिलाहरुमा छ भने महिनावारीमा गडबडी जस्ता समस्याहरु हुन्छ । यसको रोगथामको लागि औषधि भन्दा सप्रिमेन्टहरु दिने गरिन्छ । हाइपर थाइराइडमा भने रेडियोस्क्यान गरेर ट्रिटमेन्ट गर्ने र ठुलो खालको गाँड रहेछ भने अप्रेसन समेत गर्नुपर्ने हुृन्छ । टिभी जर्नलिष्ट स्मृति मल्लले थाइराइड विशेषज्ञ डाक्टर विनय भट्टराईसंग गरेको कुराकानी विस्तृतमा